Maskaxda iyo Qalbiga - Dareennada Daraasadda iyo Xukunka (Tiirka 467) - Rabbi Michael Avraham
Maskaxda iyo Qalbiga - Dareennada Daraasadda iyo Xukunka Halachic (Tiirka 467)
45 faallooyin	/ T. Benisan 10 - 04/2022/XNUMX 10 / 04 / 2022
Maalmo ka hor ayay yimaaddeen bogga Daf La Bibamot, halkaas oo arrintii la jeclayd ee ahayd “Gurigu isaga ku dhacay oo inankii abti u ahaa ayaa soo baxay oo aan la garanayn mid iyaga ka mid ah oo marka hore dhintay, shaadhka ayay cidhiidhi galisay oo ma murugoon.
Hayuta Deutsch waxay ii soo dirtay qaybtan faallada soo socota:
Way weyn tahay! Tusaalaha ugu muhiimsan (mid ka mid ah kuwa badan laakiin si gaar ah u qurux badan) ee kulanka u dhexeeya 'shaybaarka' adduunka sharci ee halakhic iyo xaqiiqada dhabta ah (telenovela qurux badan oo ilmada ka ilmaynaysa).
Dooddii na dhexmartay dabadeed, waxa aan is idhi way ku habboon tahay in aan qodobbadaas u guntado.
Cabbirrada shucuurta iyo bani-aadmiga ee arrimaha xalaasha ah
Marka aad ka fikirto xaaladan oo aad u yara sii gasho heerka maskaxeed, waa masiibo aan sahlanayn oo ku habsatay qoyskan nasiib-darrada ah (mid walba sidiisa u xasuuso). Laakiin aniga ahaan bartaha caadiga ah ma dareemin innaba. Tani waa dood halaq ah oo soo jiidasho leh oo kakan, anigana halkan ma joogo dad dhibban, yacni bini'aadam. Dhammaan kuwan waa jaantusyo ama hadhyo ku yaal marxaladda hallakh-caqliyeed. Hadafyada dabeecadda ee lagu tababaro maskaxda, kuwaas oo inta badan loogu talagalay in lagu muujiyo fikradaha hallakh. Daraasaddeenna waxaynu wax kaga qabanaynaa gacan ku dhiiglayaasha, tuugta, hiliblayaasha, beenaalayaasha, masiibooyinka iyo nasiib-darrada kala duwan, waxaanan uga wada hadalnaa dhammaan sinnaan cajiib ah. Sidaas awgeed carruurta Hyderabad waxay baran karaan arrimo culus, in kasta oo ka dib kulanka noocaas ah xaalad kasta ay waalidkood hoggaamin lahaayeen ka dib ixtiraamka wanaagga iyaga laftoodana waxaa laga tagi lahaa luqadda naxdinta leh. Laakin dhoolatuskan oo dhami si nabad ah ayay nagu ag marayeen oo indho shareer ma nihin.
Uma arko erayadan xayawaankeeda wax diidmo ah. Taas beddelkeeda, waxay la dhacsan yihiin isku-duubnida ka dhex-jira diyaaradaha dooda (dad iyo xalaal), hase ahaatee, waxaan xagga dambe ka maqlay dhaleecayn badan oo ku aaddan qabowga dooda, i.. tixgelin la’aanta dhinacyada adag ee aadamaha ee kiiskan. Gemara waxa uu kiiskan ku tilmaamay in uu yahay cad hilib ah oo ku dhacay suugo caano ah, waxana uu sii waday in uu ka hadlo sharciyada khuseeya kiiskan. Waxay gabi ahaanba iska indha tirtay masiibooyinka xun ee bini'aadmiga ee halkan ka dhacay. Qoyskan laga dhintay ayaa waxaa ka maqan xaaskii (runtii mid ka mid ah dhibka) iyo walaalkii oo labaduba isku qoys ah. Agoonta yaa u jooga? (Oh, runtii ma jiro, haddii kale halkan ma jiri lahayn album). Ka dib oo dhan, xagga dhegta nafta dhega la'aan.
Waxaan u maleynayaa in laxanka aan maqlay erayada xayawaankeeda, ay ku saleysan tahay qayb aan yareyn oo ku saabsan waayo-aragnimadayda maalinlaha ah ee beit midrash ee ardayda jaamacadda ee Bar Ilan (iyo goobaha kale ee dumarka). Ku dhowaad mar kasta oo aan u nimaadno arrintan oo kale, waxaa jiray tixraacyo gariiraya oo ka imanaya bini'aadamka iyo qiimaha iyo gaar ahaan dhinacyada dareenka ee xaaladahan oo kale, iyo dabcan dhaleeceynta Gemaarka iyo tixgelin la'aanta ardaydu ee dhinacyadaas. Qabow iyo dareen la'aanta uu ka tarjumayaa waa mid aan la fahmi karin oo aan la qiyaasi karin. Waxaan dhamaanteen caadaysanay in aan daraasad ku samayno arrinta ku saabsan in aabbuhu inantiisa yar u dhiibo nin karsan, naag laga mamnuucay arrintan iyo taas, agunot oo aan lahayn waddo uu ka baxo, "ku dheggan madalkiisa" iyo doodo kale oo Lithuania ah Talmuud.
Waxaan ogolahay naftayda in aan waayo-aragnimada ka sheego in kuwani yihiin dib u eegis muujinaya dumar badan (iyo kuwa raacsan, taas oo ku saabsan wax la mid ah. Fiiri tusaale ahaan tiirarka). 104 iyo-315). Baahnayn in la yiraahdo, Lithuania aniga oo kale ah waa laga dhaafay dareenkan BH. Xitaa waxaan talo siin lahaa maamulayaasha telenovela: Tusaale ahaan, way fiicnaan lahaayeen haddii ay sidoo kale gowracaan naagtii labaad ee walaalka oo ay caloosha ka dhuftaan, taas oo ah hooyada Cibraaniga ah ee ina-adeerkeed, oo lafteedu tahay nus. addoon iyo badh xor ah oo uu dilay Garma.Taas oo u dhaxaysa ereyga iyo ku-dubbada mikveh oo leh saddex loox oo biyo ah oo bamgaraysan oo aan lahayn dab u eg muuqaalka khamriga. Waxay wax ka baran karaan waxa ugu fiican, yacni, waxabooska. Tani waxay hodmin lahayd dooda oo ka dhigi lahayd mid aad u xiiso badan.
Naqdin la mid ah macnaha guud
Dhaleeceyntan laguma jeedin oo keliya Talmud iyo ardaydeeda. In tiir 89 Waxaan tusaale u soo qaatay dhaleecayn la mid ah, iyo markan xaalad waxbarasho-teknooloji. Waxaan ula jeedaa sheekada caanka ah ee ku saabsan tuubada dhiigga ee Technion (taas oo laga yaabo in xitaa la abuuray oo la abuuray). Halkaas ayaan wax ka koobiyeyn doonaa.
sheegay Hindisaha uu sameeyay Prof. Haim Hanani oo Technion ka tirsan, taasoo keentay in imtixaan laga qaado kuliyada Mechanical Engineering, ardayda ayaa laga codsaday inay naqshadeeyaan tuubbo dhiiga ka qaadi doonta Eilat ilaa Metula. Waxa la waydiiyay maaddada laga samaynayo, dhexroorkeeda iyo dhumucdeeda intee le’eg tahay, intee in le’eg ayay ciidda ku duugan tahay si loo aaso iyo wixii la mid ah. Dadka sheekadan soo tebiyay (aniga qof ahaan waxaan dhegahayga la yaabban ku maqlay qaar ka mid ah dadka akhlaaq ahaan ka naxay arrinkan. Baahnayn in la sheego runtii aad baan uga naxay naxdintooda) sida ay uga cabanayaan ardaydii Technion ee farsamada gacanta oo dabcan waa hore ka luntay. sawir-qaadaha aadanaha (oo ka duwan PhD-da jinsiga iyo dhaqaalaha guriga Waxay leeyihiin dareen akhlaaqeed oo aad u horumarsan, gaar ahaan marka ay naqshadeeyaan tuubo si toos ah maqaaladooda ugu hogaamin doonta nidaamyada joornaalada), xalliya imtixaanka oo soo gudbiya iyada oo aan la dhicin indho-shareer iyo weydiinaya sababta tuubada dhiigga noocaas ah loogu baahan yahay. Si uu yaababku u sii kordhiyo, ayuu sheegay in la sheegay in imtixaamkaas oo kale uu horseeday in manhajka Technion lagu barto cilmiga aadanaha. Sida muuqata qof ayaa dib u eegistan si dhab ah u qaatay.
Marka laga reebo su'aasha dhadhanka iyo kaftanka qoraaga imtixaanka oo dabcan laga doodi karo (in kasta oo indhahayga ay aad u faraxsan tahay), naqdinta lafteeda ayaa iila muuqata mid doqonnimo ah. Waa maxay dhibka haysta su'aashan oo kale?! Iyo in qof kastaa uu u malaynayo in macalinku uu damacsan yahay inuu qorsheeyo xero-qabasho oo uu ardayda ka caawiyo xallinta dhibaatada gaadiidka dhiigga? Ardaydii imtixaankii xalinaysay waxay ahayd inay ismoodsiiso in xaalku sidan yahay oo ay ka mudaharaadaan? Dhisidda iyo xallinta imtaxaanka noocan oo kale ah sina kama tarjumayso anshax-xumada, xitaa heerka dareenka akhlaaqda ee macalinka ama ardayda. By habka, xitaa dhaleeceyntan qosolka leh kama tarjumayso heerka sare ee dareenka akhlaaqda. Ugu badnaan waa cashuur bixin caddayn ah, iyo doqonnimo, saxnaanta siyaasadeed ee la dhayalsaday iyo caadifad aan loo baahnayn.
Marka laga reebo su’aasha ah ma sax iyo maangal ma tahay in su’aashaas imtixaan lagu soo bandhigo, waxaan ku doodi lahaa in ardaydii la kulantay ee xalliyey iyada oo aan il-bidhiqsi lahayn ay aad ula mid yihiin culimada xalaasha ah ee soo mara xaalad sidan oo kale ah. tii aan ku sifeeyay indhashareertaas barafaysan. Waa su'aal ku saabsan macnaha guud. Haddi xaalku yahay mid xalaal ah ama cilmi-teknooloji ah, oo ay qof walba u caddahay in aanu qofna halkan ku talo jirin in uu dhiig ku dilo ama uu dhiig qaado, ma jirto sabab ay xadhkaha quluubtoodu u gariiraan ama ugu farxaan adduunka. Waxay si fiican uga tagaan jeegaga dhacdooyinka dhabta ah. Haddii uu jiro qof ay xadhkaha ruxayso way fiican tahay dabcan. Qof kasta iyo qaab-dhismeedkiisa maskaxeed, iyo sida aynu ognahay ma jiro qof qumman. Laakin in loo arko sifo ka tarjumaysa akhlaaqda qofka iyo in gariirku maqan yahay waxay daliil u tahay akhlaaqda khaldan haba yaraatee kaftan xun.
"Baraf xariif ahaa, muxuu u arkay wax aan jirin?"
Mid ayaa sidoo kale dib u xasuusan kara midrashkii halyeeyga Korach Zatzokal kaasoo ka cawday Muuse Rabbeinu (Fiican doone, Sabuurrada a):
"Kursiga Sim" waxaa ku yaal baraf, kaas oo ku kaftamay Muuse iyo Haaruun
Barafka muxuu sameeyay? Jameecadii oo dhami way soo ururtay, waxaana la yidhi: "Jaamacyadii oo dhammi ha u soo ururiyeen baraf" markaasuu bilaabay inuu ku sheego hadallo xunxun, wuxuuna ku yidhi: xaafaddayda waxaa joogta gabadh carmal ah oo ay wada joogeen laba gabdhood oo agoon ah. oo waxay lahayd hal beer. Kolkaasay u timid inay beerto, Muuse wuxuu ku yidhi iyadii: Waa inaadan wada falin dibi iyo dameer. Waxay u timid inay abuurto - wuxuu u sheegay: "Naaskaagu ma beeran doono isku-dhafka." Wuxuu u yimid inuu goosto oo tuulmo, wuxuu ku yidhi: Ku rid ururinta hilmaanka iyo timaha. Wuxuu u yimid inuu aasaaska sameeyo, markaasuu ku yidhi: Wax ka bixi oo bixi meeltobnaadyada kowaad iyo meeltobnaadyada labaad. Isaga oo qiil uga dhigay xukunkii oo uu u dhiibay.
Miskiinkan muxuu sameeyay? Intay istaageen oo iibiyeen beertii, waxay soo iibsadeen laba neef oo ido ah oo ay faashad ku xidhaan oo ay ku raaxaystaan ​​lo'dooda. Tan iyo markii ay dhaleen ayaa Haaruun u yimid iyadii, oo wuxuu ku yidhi, Curad i sii; In uu xukunka ku caddeeyey oo uu dhalay. Waxaa la gaaray waqtigii la xiiri lahaa oo la xiiri lahaa, Haaruun baa u yimid oo ku yidhi: I sii tan ugu horraysa gaaska uu Eebbe yidhi;
Waxay tidhi: Anigu xoog aan ninkan ku hor istaago ma haysto, waayo, waan gowracaa oo waan cunaa. Oo markuu iyagii laayay ayaa Haaruun u yimid oo ku yidhi, I sii cududda iyo dhabanka iyo caloosha. Waxay tiri: Xataa markaan gowracay kamaanan ka takhalusin - waa iga qaadac! Haaruunna wuxuu iyadii ku yidhi, Hadday saas tahay, dhammaan anigaa iska leh, taasu waa wixii Ilaah yidhi; Natlan way u tagtay oo ka tagtay iyadoo ooyaysa iyada iyo labadeeda gabdhood.
Sidaas ayay darxumadan ku gashay! Markaa way yeeleen oo ku dheggan yihiin Gd!
Runtii qalbi jab, miyaanay ahayn? Waa xoogaa dib u eegisyada aan kor ku tilmaamay, in kasta oo uu farqi halkan ka jiro. Naqdin barafka ayaa runtii ku dhex jirta. Waxa laga yaabaa in ay wax ka soo saarto macnaha guud oo ay hindiso sheeko qalbi jabin leh, balse waxa hubaal ah in sheekadan oo kale ay mabda’a ahaan dhici karto, taasina waa tilmaantii xalaasha ahayd ee xaaladdan oo kale. Taasi waa sababta ay halkan caqabad ugu tahay akhlaaqda xalaasha, tanina waa sheegasho dhab ah. Marar badan oo hore ayaan ku soo sheegay Israa'iil ciyaaray, Farmashiyihii reer Yeruusaalem, kaas oo ka dhigi jiray sheekooyin ku saabsan kabuubyada akhlaaqda ee halaxah iyo kuwa diinta, oo kicin jiray rabshado. Diinta ayaa neefsatay markii ay caddaatay in sheekadan oo kale aysan ahayn oo aan la abuurin, laakiin mar walba waxaan la yaabay sababta ay u khuseyso. Runtii halachah waxay mamnuucday bannaanka Shabbat si loo badbaadiyo nolosha dadka aan Yuhuudda ahayn. Runtii, sharcigu wuxuu farayaa in xaaska Cohen uu ninkeedu kufsado. Markaa xataa haddii aanay dhab ahaan dhicin, waa dhaleecayn buuxda oo sharci ah.
Dareenkan, dhaleeceynta Shachak iyo Qurach waxay aad ula mid tahay dhaleeceynta aan kor ku soo aragnay ee ka hadlaysa kiis mala awaal ah iyo sinnaanta aad ugu macquulsan isaga. Wax shaqo ah kuma laha heerka akhlaaqda dadka iyo halligaad toona.
waa maxay dhibku?
Aynu diiradda saarno dhibaatooyinka dib u eegista tuubada dhiigga ama telenovela marxaladda. Tani waa kiis mala awaal ah oo aan runtii dhicin. Marka ay soo food saarto kiis dhab ah oo noocan oo kale ah, waxaan filayaa in aynaan sii ahaan doonin mid aan dan ka lahayn. Dareen la'aanta ayaa halkan lagu abuuray sababtoo ah dabeecadda mala-awaalka ah ee kiiska oo u muuqda dhammaan dadka ku lugta leh, iyo sababtoo ah macnaha guud ee dooda. Macnaha ay kiisaskani ka dhashaan waa caqli-xirfad. Su'aasha injineernimada waxaa lagu macneeyaa macnaha guud ee xisaabinta-teknoolojiyadda, saxna ma jiro qof dhibaya ujeeddada xisaabinta (maxaa yeelay qof walba way u caddahay inaysan jirin wax noocaas ah. Dhab ahaantii waxaa jira, tijaabinta ardayga). kartida). Isla sidaas oo kale waa runta telenovela ee masraxa. Waxaa cad in tani ay tahay kiis mala awaal ah oo loogu talagalay in lagu soo afeeyo fikradaha xalaasha ah. In kiis mala awaal ah loola dhaqmo sidii inay run ahaantii dhacayso waa arrin caruurnimo, miyaanay ahayn? Carruurtu waxay jecel yihiin inay sheekada ula dhaqmaan sidii inay tahay kiis dhab ah. Dadka waaweyni waa inay fahmaan in taasi aanay ahayn arrintu. Fikradayda, tani waxay la mid tahay su'aalaha ku saabsan kiisaska Talmudic sida Gamla Farha (Mechot XNUMX: XNUMX iyo Yevamot Katz XNUMX: XNUMX), ama Hittin oo ku soo degay kayn (Minchot Set XNUMX: XNUMX), kuwaas oo la yaabay sida kiiskan oo kale u dhici karo. dhaca Marka aad u fiirsato macnaha guud, waa in ay caddaato in aanay cidina sheegan in ay taasi dhacday ama ay dhici karto. Kuwani waa kiisas mala awaal ah oo loogu talagalay in lagu sifeeyo mabaadi'da halakhka, sida kiisaska shaybaadhka ee cilmi-baarista sayniska (eegMaqaallo On Okimas).
Marka la soo koobo, dhibaatada dib u eegistan ayaa ah in ay u maleynayaan in qofku u maleynayo in uu daweynayo kiis mala awaal ah oo isaga ka hor imanaya sidii haddii ay jirto dhacdo dhab ah halkan. Waxaad tusaale ka soo qaadan kartaa filim ama buug qeexaya xaaladahan oo kale. Ogow cidda aan qaddarin doonin Kitaabka Quduuska ah ama aragtida xaaladdan oo kale. Sidee u kala duwan yahay? Ka dib oo dhan, filim ama buug waxay ahayd inaan la kulanno dareenkaas oo aan galno xaalad. Jawaabta tan waxay ila tahay aniga : 1. Magaca macnaha guud waa farshaxan, micnuhu waa in macaamilka (fiiri ama akhriste) uu isku dayo inuu galo xaaladda oo uu la kulmo. Tani waa nuxurka baxsadka faneed. Laakin kuma jirto xaalad cilmiyeed ama tignoolajiyada-tacliineed. 2. Xitaa haddii ay dabiici tahay in dhaqdhaqaaqa maskaxeed ee noocaas ahi uu ku dhaco ragga (ama dumarka), wax qiimo ah kuma laha. Haddii ay taasi dhacdo - markaa waa fiicantahay (qofna ma qummana, xusuusnow). Laakiin sheegashada dadka magaca akhlaaqda ah ee ah inay ku dhacdo iyaga waa sheegasho gebi ahaanba ka duwan. In aan u arko qof aan tan lahayn cillad akhlaaqeed runtii waa wax aan macno lahayn indhahayga.
Kiisaska dhabta ah: muhiimadda goynta
Waxaan ku dooday in ku lug lahaanshaha maskaxeed ee kiis mala awaal ah ay tahay arrin caruurnimo sida ugu fiican. Laakiin intaas wixii ka dambeeya, waxaan jeclaan lahaa inaan ku doodo hadda inay sidoo kale leedahay cabbir waxyeello leh. Dhaliilahaa aan kor ku soo xusnay ee aan kor ku soo xusnay ee ardayda dhigata jaamacaddaha, waxaan isku dayay in aan marlabaad ku baraarujiyo muhiimadda ay leedahay in dareenka iyo maskaxdu ay ka go’aan xaaladdu marka ay wax ka qabanayaan deeqda waxbarasho. Ma aha oo kaliya ka-qaybgalka shucuureed ee noocan oo kale ah wax qiimo ah ma laha, laakiin runtii waa waxyeello. Ku lug lahaanshaha maskaxeed iyo shucuureed waxay u horseedi kartaa gabagabada hallaakh (iyo tignoolajiyada) khaldan. Garsooraha kiiska u go'aamiya dareenkiisa dartiis waa garsoore xun (xaqiiqda, waxba ma xukumo. Kaliya qayli).
Ogsoonow halkan waxaan horeba uga hadlayaa tixraaca bini'aadamka oo ku saabsan kiis dhab ah oo iga horreeya, oo aan ahayn kiis mala awaal ah. Haddii aan la kulmo kiis walaal iyo walaal ku wada halaagsamay masiibo aad u xun, waa arrin dhab ah oo dhacday xaqiiqdii, markaa xaaladdan oo kale waa in ay qiimo leedahay dareenka dareenka aadanaha ee ku jira. Halkan waxaa hubaal ah in qiimo iyo muhiimad ay leedahay in kiiskan lagu daaweeyo heer kasta oo isku mar ah: garaadka-halaqic, caqli-akhlaaqda iyo aadamiga-khibrad. Hase yeeshee, xitaa xaalad dhab ah, waxay ku habboon tahay marxaladda koowaad in diiradda la saaro diyaaradda ugu horreysa oo la gooyo labada kale. Garqaaduhu waa inuu si qabow uga fikiraa dacwadda isaga hor imanaysa. Xalaqadu waxa ay tiraahdo shaqo kuma lahan waxa ay shucuurtu leedahay (oo sida ay aniga ila tahay xitaa waxa akhlaaqda ay leedahay ma jiro), waana wanaagsan tahay in la sameeyo. Garqaaduhu waa inuu sharciga ku gooyaa degenaansho, sidaas darteedna uu xaq u leeyahay inuu toosiyo runta Tawreed. Marxaladda ka dib falanqaynta qabow ee xalaqaadka, waxaa bannaan in si maskaxiyan loo galo xaaladda iyo akhlaaqdeeda iyo cabbirkeeda dadnimo, iyo in sidoo kale laga eego dhinacyadan. Taas macneheedu waxa weeye, marka falanqaynta xalaqa ee bilawga ah ay soo saarto dhawr fursadood oo suurtagal ah, qofku wuxuu tixgelin karaa dareenka iyo cabbirka aadanaha iyo akhlaaqda si uu u go'aamiyo dhexdooda oo uu doorto xukunka dhabta ah. Dareenku waa inuusan ka qayb qaadan falanqaynta macquulka ah, laakiin inta badan waa ka dib. Intaa ka sokow, waxaad arki kartaa qiimaha dhabta ah ee la wadaago oo aad ka damqato dhibka qofka kaa horreeya, xitaa haddii aysan lahayn saameyn xalaal ah. Laakiin waxaas oo dhami waa inay ku dhacaan diyaarado is barbar socda, oo ay doorbidayaan inay sidoo kale ka daahdaan go'aanka hore ee xalaqada. Ku lug lahaanshaha shucuureed ee xukunka gabi ahaanba ma aha mid la jecel yahay.
Halkan si faahfaahsan ugu soo noqon maayo sheegasho kale oo aan marar badan hore u sameeyay (eeg tusaale ahaan tiirka 22, Iyo taxanaha tiirarka 311-315), In akhlaaqdu aanay wax xidhiidh ah la lahayn shucuur iyo waxba. Akhlaaqdu waa caqli-gal halkii ay ka ahaan lahayd arrin caadifadeed. Mararka qaarkood shucuurtu waa tilmaanta jihada akhlaaqda (dareenka), laakiin waa tilmaame dhib badan, waxaana muhiim ah in laga digtoonaado in la dhaliilo oo aan la raacin. Ixtiraam oo tuhmo. Dhammaadka maalinta, go'aanka waa in lagu go'aamiyaa madaxa ee maaha in wadnaha, laakiin madaxu sidoo kale waa inuu ku xisaabtamaa waxa qalbigu leeyahay. Murankaygu wuxuu ahaa in aqoonsiga dareenka khibradeed ee dareenka uusan lahayn macno qiimo leh. Tani waa dabeecadda bini'aadamka, iyo sida oo kale waa xaqiiqo. Laakin wax qiimo ah ma laha, kuwa aan la siinna waa in aysan ka welwelin xaaladdeeda akhlaaqda iyo qiimaha ay leedahay.
Anigoo taas ka duulaya, waxaan ku doodayaa in xitaa marxaladda labaad, ka dib falanqaynta hore ee xalaqada, in aanay jirin meel la taaban karo oo caadifadu leedahay. Waayo, anshax ahaan laga yaabaa haa, laakiin ma aha ee dareenka (per se. Laakiin laga yaabee sida tilmaame iyo wixii la mid ah). Taa beddelkeeda, ka-qaybgalka shucuurtu waa warqad tijaabo ah oo loogu talagalay khiyaanada aan habboonayn iyo leexinta fikirka, iyo samaynta go'aannada khaldan.
Gebagebada waxaas oo dhan ayaa ah in marka la baranayo arrin Talmudic ah oo xalaal ah aysan qiimo lahayn ku lug lahaanshiyaha shucuureed, xitaa waa in qofku isku dayo inuu ka gudbo dhaqdhaqaaqa maskaxeed ee noocaas ah xitaa haddii uu jiro (waxaan ka hadlayaa kuwa aan weli awoodin inay ka gudbaan. waa la qabsadaa). Axkaamta xalaasha ah ee wax ku oolka ah (sida go'aan ku saabsan kiis gaar ah oo ina hor yimaada), halkaasoo shucuurta iyo akhlaaqda la hakiyo, lagana yaabo in la siiyo meel marxaladda labaad ah (gaar ahaan akhlaaqda. Si shucuur yar).
Waxaa jira dood heer qalab ah oo ah in qofka ku dhaqma in aan ula dhaqmin aadanaha si mala-awaal ah kiisaskan mala-awaalka ah ma sameyn doono sidaas oo kale marka la eego kiisaska dhabta ah. Aad ayaan uga shakisanahay. Waxay ila tahay eray wanaagsan oo toddoba barakooyin ah, mana arko calaamad muujinaysa saxnaantiisa. Si kastaba arrintu ha ahaatee, qof kasta oo sidaas sheeganaya waa inuu la yimaadaa caddayn hadalkiisa.
Dacwad la mid ah ayaa laga yaabaa in laga sameeyo caadooyinka farshaxanleyda. Gemara ayaa sheegay in farshaxan, dhakhtar ama qof la macaamilay haweenka, "in iyada addoonsi la dhibay", oo sidaas daraaddeed isaga u oggolaaday waxyaabo ka mamnuuc ah ragga kale (kelinimada ama xiriirka dumarka iyo wixii la mid ah). In uu ku mashquulo shaqadiisa xirfadeed waxa ay damisay shucuurtiisa waxa ayna ka hortagtaa gafafka iyo fakarka la mamnuucay. Ma garanayo haddii jinsiga dhakhtarka dumarka ay caajis tahay sababtoo ah, xitaa marka uu la kulmo haweeney asal jacayl iyo xirfad-darro ah. Waxaan ka shakisanahay in tani ay tahay xaalad ka duwan, laakiin waxay u baahan tahay baaritaan. Dadku waxay yaqaaniin sida loo sameeyo kala-goysyada iyo kala-goynta, dareenkan Dayan wuxuu kaloo ku bartaa Abidathiyahu Tridi. Marka uu qofku ku hawlan yahay xirfadiisa waxa uu garanayaa sida uu shucuurtiisa uga saaro, taas macnaheedu maaha in ay ka caajis badan yihiin xaaladaha kale. Dabcan, fannaanka ku mashquulsan fankiisa waa xaalad aad uga fog xaaladaha aan kor ku soo xusnay ee daraasadda xalaasha ah, mar haddii fannaanka ay u yihiin dumar iyo xaalado dhab ah, halka aqoonyahanka ay kuwani yihiin kiisas mala awaal ah. Sidaa darteed, xitaa haddii aan ogaanno in fannaanka dareenkiisu hoos u dhaco, tani macnaheedu maaha in tani ay tahay waxa ku dhacaya aqoonyahanka. Waxaa laga yaabaa inay la mid tahay garsooraha ka gooya dareenkiisa, maadaama garsooruhu uu wajahayo kiisas dhab ah laakiin wuxuu ku sameeyaa xaalad xirfadeed. Halkaa waxaa laga yaabaa in la yiraahdo fankeeda ayay dhibsatay.
Waxaa laga yaabaa in lagu doodo in bartaha la kulma xaaladahan oo kale oo aan ku kicin dareenka bini'aadmiga uusan si buuxda u gelin xaaladda. Tani waa dood isaga ka dhan ah heer aqooneed, ee maaha heer akhlaaqeed. Waxa lagu andacoonayaa in uu si liidata wax u baranayo ee maaha in uu yahay qof akhlaaq xun. U malayn maayo in arrintu sidaas tahay. Qofku waxa hubaal ah in xaalad waxbarasho uu geli karo xataa haddii aanu ku jirin xagga bini’aadmiga. Dooddaydu, dabcan, waxay ku xidhan tahay aragtida halakhah oo ah shaqo xirfad-farsamo ah oo aan ku lug lahayn diyaarado shucuur ah (marka laga reebo marxaladda labaad, iwm.). Si kastaba ha ahaatee, cillad akhlaaqeed hubaal ma arko halkan.
 Ma hubo inay wax xiriir ah la leedahay dabeecadda dheddigga. Tani waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay waxyaabaha cusub, maadaama dumarku aanay inta badan la qabsan arrimahan tan iyo carruurnimadii.
 Natiijada lafteeda waa la soo dhawaynayaa fikradayda. Dhab ahaantii dhib uma aha ardayda Technion inay wax ka bartaan bini'aadantinimada qaarkood. Laakiin ma jiro wax xidhiidh ah oo ka dhexeeya arrintan iyo kiiska xididdada dhiigga. Kiisku ma muujinayo wax dhibaato ah oo u baahan in la xalliyo, haddii ay dhibaato noocan oo kale ah jirto, daraasaadka bani-aadmigu sinaba ugamay qayb qaadan lahayn xalkeeda.
 Rashi ee lamadegaanka XNUMX, p.
Jawaabta Aakhiro ee Allaah
Jawaab ku socota dawlad Yuhuudi ah
Jawaab la'aan sheegashada adduunka oo aan la diidi karin
Fikradaha 45 ee "Maskaxda iyo Qalbiga - Dareenka Daraasadda iyo Xukunka Halacha (Column 467)"
T. Benisan 10 - 04/2022/01 saacada 56:XNUMX
Arrinka halakhic ee halkan lagu sheegay waa la cambaareeyey runtii, haddii aan si sax ah u xasuusto, ka dib dilkii xubnaha qoyska Maklef ee Motza intii lagu jiray dhacdooyinkii XNUMXdii.
Laba iyo tobnaad ee Nissan 13 - 04/2022/14 saacada 39:XNUMX
Waan ka xunahay waan khaldanaa, anigoo tixraacaya dilka qoyska Unger ee Safeed, mid ka mid ah jawaabaha Ahiezer HG Lag.
Saddex iyo tobnaad ee Nissan 13 - 04/2022/14 saacada 53:XNUMX
Sidee ku heshaa jawaabta? Waxaan jeclaan lahaa inaan arko il. Mahadsanid.
Saddex iyo tobnaad ee Nissan 13 - 04/2022/17 saacada 23:XNUMX
Waxaan si kooban u soo koobayaa wixii halkaas laga sheegay.
A. Kiiskii ka soo muuqday tiirka:
[Nin baa guursaday gabar uu abti u ahaa iyo naag kale. Haddii uu dhinto walaalkii lama noolaan karo abtigiis (cawlaha) sidaas darteed iyada iyo haweeneyda kale ee baahan waa ka dhaafaan ilmo iska soo rididda iyo dammaanadda ( ilmo iska soo rididda xaaraanta ah). Haddii inantii uu adeerka u ahaa ay ka dhimato ninkeeda ka hor oo uu ninkeedu dhinto markaas wakhtiga dhimashadeeda naagta kale ma xishoon oo sidaas darteed waxay u baahan tahay ilmo.
Xukunka Gemaraa waxa weeyi haddii aanu qofku garanayn kii hore u dhintay, in uu ninku markii hore dhintay oo naagtiisii ​​(wiil uu adeer u ahaa) uu weli nool yahay iyo in kale oo ay naagtii kale u dhimatay foolxumo, ama ay naagtu markii hore dhimatay ka dibna ninku uu dhintay iyo in kale. markaas naagtii kale waxay ku leedahay ilmo. [Sharcigana waa sababta oo ah shaki ayaa ku jira in ay waajib ku tahay Bibom ama ka mamnuuc Bibom markaas shaadhka ee maaha Bibum].
B. Kiiskii Ahiezer:
[Nin dhintay oo markii uu dhintay ka tagay shahwo ama uurjiif waxtar leh xaaskiisa waa ka reebban tahay karaahiyada. Laakiin hadduusan wax carruur ah dhalin, ama qof kastaa dhintay intuusan dhiman ka hor, markaas naagtiisu waa inay dhalato. Haddii uu dhinto oo uu ka tago uur yar oo dhashay dhimashadiisa ka dib oo uu xitaa noolaado hal saac oo keliya oo uu dhinto, ama uu ka tago wiil dhimanaya, waa abuur wax kasta oo naagtiisuna waa ka reebban tahay karaahiyo.
Eedaysanaha Axiiceser waa aabbe dhintay oo wakhtiga dhimashadiisa ka tagay hilib hilib ah oo dhintay maalin aabbihiis ka dib, haddii wiil hilib ah loo tixgeliyo abuur wax kasta sida dhimanaya iyo in naagtii dhimatay ay ka reeban tahay karaahiyada, ama haddii ay tahay mid aan waxba tarayn. hilib cun (kaasoo ay u badan tahay inuu ku dhiman doono XNUMX bilood gudahood). [Rose Garden waxay u malaynaysaa inaan ugaadhsiga loo qaadanayn inuu nool yahay oo dhan oo uu ka sii daran yahay inuu dhinto oo naagtii dhimatay waa inay noqotaa bibom. Ahiezer wuxuu caddeeyey waxyaabo dheeri ah in Ben Tripa laga eryay Maybum]
Wax ay isaga shabahaan yihiin in laba qof oo qoyska ka mid ahi ay ku dhinteen muddo gaaban gudaheed (isku mid dartiis).
Saddex iyo tobnaad ee Nissan 13 - 04/2022/17 saacada 27:XNUMX
Kani waa bogga maanta 🙂
Saddex iyo tobnaad ee Nissan 13 - 04/2022/19 saacada 06:XNUMX
Waxaan u maleynayaa in Nadav uu tixraacayo jawaabta Ahiezer ee HG ee bartamaha CJ:
Bishii Adar XNUMX (c) su’aashii ahayd Dargii waagii la dilayay Ciraaq aabbihii la dilay ka dibna wiilkii noolaa maalin maalmaha ka mid ah, kuwaas oo gacan-ku-dhiiglayaashu ay toorey ku dhufteen sanbabadana ka dalooleen, haddii loo oggolaado. guurso iyada oo aan la soo saarin, sida Ginat Vardim responsa Sephardi waxaa la keenay jilbaha Yuusuf iyo Harka'a iyo Petah Tikva, taas oo ka sii dari karta.
Halkan waxaan ku arkay Ginat Vardim responsa manaan helin wax caddayn ah oo aan ku cusboonaysiiyo, kaliya diinta Matanitin oo dhimanaya oo hagaya oo aan ka iman Tani Prefa, taas oo macnaheedu yahay in Detrapa aan la eryin. Si kastaba ha ahaatee, laga bilaabo Toss D. Dhanka Tuulada, waxaad mooddaa in uu dhimanayo nin lagu macneeyay Sanhedrin oo ay Dalarbanan Darbav Hoy ku sheegeen in uu ugaadhsi yahay, sidaas darteed Maimonides oo ku jira PB-ga gacan ku dhiigle Dahurgo looma dilin sidii wax ugaadh ah, iyo mid kale oo Demprashim GC ah. Dhaaf kii la qiyaasay oo dhimanaya. Waxa kale oo si cad u cad in guryaha Hari Batos Yavmot, halkaas oo Demguide ku yaal meel aan dhammaad lahayn, iyo gudaha B.H. A.H. Midda kale, waxa lagu caddeeyey odhaahdii Toss, tusaale dhimanaya oo uu hagayo qof ugaadhsi la mid ah, iyo weliba duullaankii Qur’aanka Daa’uud, ee ku lifaaqan xukunnada S. waxba ha ka yeelin waxa uu ugaadhsaday, ee bakhtiya iyo hanuunintu waxay u baahan yihiin biibiile oo waa laga soo eryay. Guud ahaan waxaa la yaab leh in wiil uu awoow u yahay haddii uu u qaato in uu u baahan yahay in la badbaadiyo, sidoo kale waxaa dhici doonta in ay iska soo xaaqdo xaaska walaalkii uu dhalay wiil uu dhalay oo mar haddii uu hadalka keenay. Tuuri Reid on Shabbat KK dhab ahaantii ma dareemayo gabi ahaanba sababtoo ah shakiga shakiga, uma baahna in la badbaadiyo oo loo oggolaado inuu guursado. + Shum in Beit Yitzchak responsa, Chiv. A.A. ee Beit Yitzchak responsa, kaas oo uu dhamaystiray G.C.
Laakiin tani maaha arrinteena. Halka qofku uu la dhacsan karo habka daaweynta iyo la'aanta buuxda ee tixraaca cabbirrada shucuureed.
Saddex iyo tobnaad ee Nissan 13 - 04/2022/19 saacada 31:XNUMX
[Iyadoo ku saabsan dhamaadka odhaahdaada ku saabsan habka daawaynta, dalxiiska khasnadda xigmadda waxay muujinaysaa in su'aaliyaha Ahiezer uu yahay Rabbi Zvi Pesach Frank oo uu waydiiyey rabbaaniga Safeed halka ay shilku ka dhacday, waxayna mar hore sameeyeen. muujiyay naxdinta, iwm.
Daqiiqad kooban ayaan is idhi, waxa laga yaabaa inay la mid noqoto sheekadii maalinlaha ahayd ee wadaadkii wankii saaxiibkii ku dilay, oo weliba aabbihiis ku boodboodo oo uu ka sheekaynayo koolkoolinta mindida, ee maqaallo iyo wacdi lagu qoray. laakiin gabi ahaanba la mid ma aha sababtoo ah waa dil cadow.
Inta u dhaxaysa jawaab xalaal ah iyo wacdi ammaan ah
Saddex iyo tobnaad ee Nissan 13 - 04/2022/23 saacada 57:XNUMX
XNUMX-kii Nisan XNUMX (Rabbi Yuusuf Caro's)
Dhammaan doodaha ku saabsan dareenka ama dareen-la'aanta garqaadayaasha Halacha ee ku salaysan qaabaynta jawaabahooda - waa mid aan khusayn. Waxgaradku waxa ay dareenkooda ku muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin munaasibadaha isugu yeedhay ee ay bulshada dhexdeeda ka jeediyeen khudbado ay ugu talo galeen in lagu kiciyo dareenka ka soo qaybgalayaasha. Jawaabta xalaasha ah dooddu waa hallakh 'qalalan'. Si gaar ah loo xukumo oo gooni loo dalbado.
Waxaa xusid mudan in wax yar oo ka mid ah shuqullada xikmadaha reer binu Israa'iil la daabacay, qayb ahaan sababtoo ah kharashka daabacaadda. Sidaa darteed, isku day inaad daabacdo xulashada leh hal-abuur muhiim ah. Haddi ay tahay wax ku cusub halyeyga ama ha ahaado mid ku cusub halyeyga. Muujinta dareenka farxadda ee warka wanaagsan iyo murugada xanta xun - ma jirto wax cusub, qof kastaa wuu dareemayaa, looma baahna in la dheereeyo iyada oo la isku daro. Xitaa hal-abuurnimada waxay daabaceen wax yar oo yar.
Salaan, ninka yar.
Sixitaan iyo faallooyin
Saddex iyo tobnaad ee Nissan 14 - 04/2022/00 saacada 06:XNUMX
Faqrada 1, sadarka 1aad
… Iyada oo ku saleysan erayadooda…
Waa in la ogaadaa in mararka qaarkood towbaddu ay ku dheeraato erayada murugada, marka qofka lagu khasbo inuu si adag u xukumo. Marka garqaaduhu uu dareemo in inkasta oo rabitaankiisa weyn uusan awoodin inuu badbaadiyo - markaas wuxuu sidoo kale mararka qaarkood muujin doonaa sida uu uga xun yahay xukunkiisa.
Tusaale ahaan, Rabbi Chaim Kanievsky wuxuu si kooban u faray booskiisa dhowr eray, laakiin Rabbi Menachem Burstein wuxuu sheegay in ay jiraan kiisas uu Rabbi Kanievsky yiri: 'Oh, oh, oh. Ma ogolaan karo'.
T. Benisan 10 - 04/2022/07 saacada 25:XNUMX
Wax la mid ah ayaa ahaa markii mid khalad ah uu waydiiyay Rosh Yeshiva sida ay ula macaamilaan arrinta PP iyada oo aan iyaga u keenin kacsi galmo. Waxa uu ku jawaabay in ardaydu aanay la tacaalin xaqiiqada, balse ay la tacaalayaan xeerar xalaal ah oo arrintaas khuseeya.
Runtii jawaab la yaab leh, sababtoo ah sharraxaadda Mishnah ma aha "ficil ahaa".
Wax intaa ka yarna, Shlomi Emuni Yisrael, oo ay hormuud ka tahay aqoonyahanno wax baranaya, ayaa u ololeynaya sidii loo caawin lahaa qoysaska.
T. Benisan 10 - 04/2022/07 saacada 27:XNUMX
Arrimahani waxay la mid yihiin "tijaabada shilalka" baabuurta, si loo tijaabiyo caabbinta xaaladaha ba'an. Ma aha in aan hubno in baabuur kasta uu sidan oo kale ku dhaafi doono waddada
T. Benisan 10 - 04/2022/08 saacada 29:XNUMX
A. Falanqayntaadu waxay si buuxda u seegtay qosolka hadalladayda (iyo doc: telenovela! Gudaha kaydka cajiibka ah ee qoraallada ay bixiso qoraallada, waxaad wax badan qori kartaa.).
B. Labadaba aniga iyo ardaydaada doctoral-ka ah (kuwa aan ku jirin maqaallada joornaalada-sayniska-ka qoomameynta, mana wax ka bartaan Waaxda Macrame iyo Dhaqaalaha Guriga. Yaa yiri materialism iyo chauvinism oo aan aqbalin?) Si fiican u fahma laba-standard. . Sida ku xusan, qaar naga mid ah xitaa way ku raaxaystaan. Runtii, inteenna badankeen waxay la kulmaan arrimaha gemara ee noocaan oo kale ah markii ugu horreysay, waxayna iila muuqataa in qofka aqoonta u leh iyo kan caadiga ah uu ka faa'iidaysan karo oo kaliya eegeenna yaabka leh iyo kuwa cusub ("Shisheeyaha") si sax ah sababtoo ah waa mid asal ah oo aan horay loo baran. fiirsashada joogtada ah. Awoodda caafimaadka leh ee lagu eegi karo wax cusub ayaa muhiim u ah qof kasta. Ha ka baqin, culimo iyo garsoorayaal ka fiican (ma transgender) ayaa ka soo baxay.
saddexaad. Si kastaba ha ahaatee, aqoonyahanka dayan iyo xaakimku runtii waa in aanay si qadhaadh ah u ooyin oo aanay meesha ka saarin xidhmooyinka cad ee xidhmooyinku inta ay wax baranayaan, taas beddelkeedana ay ku dadaalaan garaadkooda iyo kartidooda wax-ku-sheeg iyo wax-barasho. Waxaan ka hadlayaa (ka hadlaya) muuqaal labajibbaaran oo caafimaad qaba. Haa, xitaa indho-beelid ayaa shaqeysa. Ilmo kaliya maaha.
D. Oo miyaanay wadaaddo ahaan ahaan doonin sidii nin hudheelle ah? Bax oo baro sida ay u ekaanayaan xukunnada garsoorayaasha Maxkamadda Sare, iyagoo eegaya mawqifkooda, waxay wax ka qabtaan arrimaha muhiimka ah ee mararka qaarkood sidoo kale khuseeya masiibooyinka nooc ama mid kale. Falanqaynta sharcigu waxay ahaan doontaa mid si walba u fiiqan, iyada oo aan la iska fogayn hufnaanta dooda, waxa mar walba jiri doona gogol-xaadh kooban ama weedho la socda oo la xidhiidha qiimaha iyo dhinaca akhlaaqda.
Ilaahow. Su'aasha ku saabsan webiyada dhiigga iyo tuubooyinka ayaa tusaale wanaagsan u ah kaftanka xun. Waxay taabanaysaa dood joogto ah oo halkan ka jirta, oo ku saabsan quudhsiga iyo muhiimadda la'aanta macnaha guud, jawiga iyo waxbarashada.
T. Benisan 10 - 04/2022/09 saacada 31:XNUMX
A. Runtii maan seegin. Taa lidkeeda, waxaan wax ka qoray la dhacsanaanta iyo ku raaxaysiga nuqul ka mid ah oo aan si fiican u fahmay kaftanka. Haddana xaarka waxaan ka fahmay in ay jirto dhawaaq dhaleecayn ah, dabcan waan ku saxsanaa. Hadalkaaga halkan ayaa si cad u qeexaya tan. Gemarada wadarta kuma jiraan hordhac gabay ah oo nooca Cheshin ah.
B. Dhab ahaantii waa aragti laga faa'iidaysan karo, laakiin inta badan aan laga faa'iidaysan heerka xalaasha ah. Tan waxaan kaga faallooday dhammaadka tiirka. Waxaan diiradda saarayaa dhaleecayn anshaxeed oo aan khusayn.
saddexaad. Waxa aan gartay in ay tahay muuqaal laba jibaaran, taasna waan ka hadlay. Su'aasha aan la tacaalayay ayaa ah in maqnaanshaha diyaaradda labaad ee la xiriirta kiis mala awaal ah ay tahay walaac iyo in kale.
D. Garsoorayaasha Maxkamadda Sare, si ka duwan garqaadayaasha, waxay khuseeyaan sharciga ee maaha kuwo khuseeya. Sharciga waxaa jira miisaan ka badan kan halakhah (had iyo jeer maahan si sax ah) dareenkooda. Marka laga soo tago, sharci-yaqaanka Halachic wuxuu wax ka qabtaa kiisaska la taaban karo, Gemara ma sameeyo. Erayadayda waxaan u istaagay qaybtan.
Ilaahow. Waxaan xusay dhaleeceynta kaftanka xun, waxaanan si cad u sheegay in tani aysan ahayn waxa aan la macaamilayo. Su'aasha aan la tacaalayay waxay tahay ma bannaan tahay dhaleeceynta akhlaaqda.
Ugu dambeyntii, eedeynta wax-ku-oolnimada iyo nin jeclaysigu waa mid caadi ah oo aan khusayn (sida caadiga ah si fiican ayaa loo adeegsadaa marka ay doodaha la taaban karo dhammaadaan). Marka aan ka warbixiyo aragtidayda waayo-aragnimada waxaan ka hadlaa xaqiiqooyinka. Haddii natiijadu tahay mid la taaban karo, markaa xaqiiqadu waxay u badan tahay inay sax tahay. Habka wax looga qaban karo ma aha in natiijada la diido ama la eedeeyo nuxurka, balse waa in si caqli-gal ah loogu doodo in xaqiiqadu aanay run ahayn. Haddaad damacday inaad sidaas samayso, anigu ma aan dareemin erayadaada dood sidan oo kale ah. Mid ka mid ah xanuunada dadka daciifka ah (haweenka macnaha guud waa hubaal dad daciif ah, had iyo jeer maaha in lagu eedeeyo. Halkan waxaan xitaa diyaar u ahay inaan aqbalo qayb ka mid ah weedha karaahiyada ah "daciif"), waa in aan ka dhiidhiyo sharraxaadda dhabta ah halkii ay wax ka qaban lahayd. xaqiiqooyinka. Horta waxaan ka qoray arrin la xiriirta deeq-waxbarasho oo dumar ah, inta badan dumarkii akhriyayna way dhibsadeen halkii ay ka soo saari lahaayeen gunaanadkii loo baahnaa oo ay isku dayi lahaayeen inay hagaajiyaan. Waa warqad tijaabo ah oo lagu xusayo xaaladda (haddii aad u malaynayso inay wanaagsan tahay, markaa xusku maaha mid ka xun indhahaaga dabcan, laakiin markaa ma arko waxa laygu eedeeyay).
T. Benisan 10 - 04/2022/10 saacada 05:XNUMX
Dhaleeceydu maaha Gemara ee waa habka aqoonyahanka-Lithuania ee lagu qoslo codsiga tixraaca labanlaaban. Tusaalaha garsoorayaasha ma aha in loo tago gabayada la buunbuuniyay ee Cheshin ee caanka ah, waxay leedahay tusaalooyin aad uga guul badan oo culus, sida aad la socotaan waxaan ku mashquulsanahay maalmahan waxbarista Yuhuudda qaaliga ah ka dib markii ay ka qalin jabiyeen Maxkamadda Sare ee sare iyo meelaha ay mudan yihiin in loo fiirsado.
Waxaan kugu eedeeyay inaad asal ahaan la xiriirto qaabka halkii aad ka lahaan lahayd nuxurka, taas oo ah, sida la yaab leh - mar kale, si aad u dhoola caddeyso. Qof kasta oo ku adkaysta inuu ku majaajilooto xubnaha shirkadiisa marar badan, waa isaga si sax ah in qofku ka shakiyo in dooddiisu ay yar tahay guusha. Ama, si aad u qeexdo luqadda quduusiintaada: "Qosol badan oo kor ku xusan waa mid caadi ah oo aan khusayn (sida caadiga ah si fiican ayaa loo isticmaalaa marka dooda dhabta ah ay dhammaato)."
Waxaan fahamsanahay dabcan in ficil ahaan aan la kulmo jawaabta noocan oo kale ah arday badan, tanina waxay caddaynaysaa fikradaha noocaas ah iyo kuwan oo kale, waxaan kaliya ka soo horjeedaa qaabka wax u dhimaya (si ka duwan ardayda PhD ee jinsiga iyo dhaqaalaha guriga, kuwaas oo aad u horumariyay dareenka anshaxa, gaar ahaan marka naqshadaynta marinka nidaamyada joornaalkooda) Cilmiga qoomamaynta"), taas oo ah, mar kale ayaanu soo laabannay, oo wakhtigan waxaan soo qaadan doonaa luqaddayda xurmada leh, " doodda joogtada ah ee halkan ka jirta, ee ku saabsan quudhsiga iyo ku-xidhnaanta la'aanta muhiimadda macnaha guud, jawiga iyo waxbarashada ".
T. Benisan 10 - 04/2022/14 saacada 17:XNUMX
Laakiin tixraaca labanlaabka ah ayaa ka maqan Gemara laftiisa. Kani maaha hal-abuurkii Lithuania. Aqoonyahanka Lithuania waxa uu ku dheggan yahay oo kaliya waxa jira, sheegashadiisuna waa in tixraaca labanlaabku uu yahay mid gebi ahaanba sharci ah laakiin ma aha arrin ku saabsan daraasadda arrinta, oo hubaal ma aha in sinaba u muujineynin wanaag ama cillad.
Ma fahmin sheegashadaada qaabka. Halkan wax qosol ah ma jiro. Kuwani waa doodaha caadiga ah ee nacasyada / kulliyadaha jinsiga / waaxaha. Tani waa waxa ay sameeyaan ku dhawaad ​​​​mar kasta. Waxa aan ka sheegay dumarka oo dhan, xataa kuwa aan baranin jinsiga (intooda badana aniga oo kale ah), waxa aan sheegay in doodaha noocan ahi ay yihiin kuwo lagu garto dumarka, waxaana filayaa in arrimahani ay yihiin kuwa ka soo baxay waayo-aragnimadayda. Ma jiro wax dood ah halkan laakiin u fiirsashada dhabta ah.
Talaado Nissan 10 - 04/2022/15 saacada 47:XNUMX
Runtii, sida aan u qoray Sarah, halkan ma jirto cillad akhlaaqeed, waxaan ku arkay Facebook mid ka mid ah culimada uu soo jeediyay tusaalooyin la mid ah in Tractate Yevamot uu soo noqnoqonayo oo ku saabsan Ruuben iyo kufsigiisa, si ay u noqoto mid qiimo leh. Si loo dhawro sharafta Ruubeen iyo Shiimoon, oo beddelkeedana tusaalayaal u soo jeediyo Aridata, iyo Delfon, iyo Haamaan tobankiisii ​​wiil oo kale. (Dhanka kale waxaa jirta xaalad la yiri Purim dartiis oo uusan ula jeedin haba yaraatee) In lagu eedeeyo bartayaasha jinsiga in aysan dhab ahaan ula jeedin balse ujeeddadoodu ay tahay in ay daabacaan maqaallo, tani waa sumcad-dil ee maaha fiirsashada dhabta ah.
T. Benisan 10 - 04/2022/10 saacada 23:XNUMX
U fiiqan sidii hore. si fiican ayaa loo sameeyay.
Qaar ka mid ah fikradaha aan la xallin:
A. Kaftankii xayawaankeeda runtii waa la tabcay. (Waxaan qirayaa inaan sidoo kale seegay akhrinta koowaad)
B. Waxaan u maleynayaa in taasi ka caawineyso ilmaha Hyder xaqiiqda ah in uu qaabeeyo qaababka Gemara. Haddii saaxiibkiis uu weydiiyo waxa dhabta ah ee meelna ka soo baxay waxa uu bilaabayaa in uu qallafsado oo guduudasho.
saddexaad. Haddii xaaskaygu ii sheegto inay waddada ku aragtay jiir la jajabiyey, iyada oo aan si sax ah u burburin muraayadda, igama yeeli doonto lallabo. Haddaan u sheego - way matagaysaa. Dadka qaar ayaa naftooda u sawira xaqiiqada ay akhriyeen ka dibna si gaar ah ayay ula kulmaan qaarna ma arkaan. Mid ayaa akhrin kara Harry Potter ka dibna wuxuu arki karaa filimka oo wuxuu odhan karaa - Runtii uma malaynayn sidaas! Oo qof kale ma i malayn. Waxaan aaminsanahay in caqiidooyinka Bar Ilan ay fahmaan labajibbaaran, laakiin ma awoodaan inay qiyaasaan xaaladaha naftooda.
D. Macnaha la wada leeyahay, waxa aan filayaa in haddii uu qofku la kulmo xaqiiqada dhabta ah ee xaaladda uu wax ka baranayo, ay aad u adkaan doonto in uu xidhiidhka ka go’o. Isla markiiba naftiisa ayuu u rinjiyeeyaa xaalada markuu la kulmo. Sabab kale oo ay ugu fududdahay ilmaha Hyderabad in uu barto in uu ku yimaado waddo qaldan iyo wixii la mid ah. Aad uma laha adduunkiisa.
Ilaahow. Waxa kale oo suurtogal ah in rabitaanka hal-abuurnimada, kaas oo ku jira qaar ka mid ah bartayaasha, iyo in laga soo hindiso adduunkooda adduunyada Talmudic oo aan gebi ahaanba u iman sidii kuwa qaata, ay keento waxbarashadu inay noqoto mid shucuur leh.
iyo. Shaki la'aan, kala goynta shucuurtu waxay caawinaysaa in si cad loo fahmo arrimaha. Weli waxaa laga yaabaa inaad wax lumiso haddii aanad ku xidhin shucuurta hadhow. Akhlaaqda dhab ahaantii waa inaan ku xiraa si aan u fahmo arrinta, laga yaabee sidoo kale dareenku wuxuu leeyahay meel halkaas ah.
(Ma fahmin waxa dhibku ka jiro tuubada dhiiga Walaacadaha, Vampire-ka waa in lagu caawiyaa sidii uu dhiigga uga rari lahaa meesha uu dadka ku gowraco, una raro jikada, sidaad u dhisi lahayd, iwm. Laakiin taasi waa su'aal aan waxba galabsan.
T. Benisan 10 - 04/2022/14 saacada 21:XNUMX
A. Malaha waad tabaysay. Laakiin aniga ilama aha. Dhaleecayn kasta oo meesheeda jooga wuu taagan yahay iyadoon loo eegin su'aasha kaftanka ah.
B. Runtii, waxay la mid tahay weydiinta R. Chaim waa maxay digsigu.
saddexaad. tani waa fiican tahay. Wax dhib ah igama hayo kuwa maskaxdooda ku sawiran xaaladaha, iyo kuwa ka naxay. Kaliya uma maleynayo in naxdintaani ay muujineyso wanaagga ruuxiga ah iyo akhlaaqda, sidoo kalena maqnaanshaheeda ay muujineyso cillad.
D. Eeg c. Tan waxa laga yaabaa inay la xidhiidho hadalkayga cagajiidka ah ee dhamaadka tiirka ee ku saabsan cilladaha daraasadda lafteeda.
Ilaahow. Caafimaadka. Ma jiraan wax sheegasho ah halkan? Anigu kama hadlayo ogaanshaha dumarka ama bartayaasha, laakiin nuxurka. Ma aha meesha ay ka timid, laakiin haddii ay tahay mid muhiim ah oo lama huraan ah.
iyo. Meesha uu joogo ayaan u sharaxay.
Ma fahmin waxa dhibku yahay su'aal ku saabsan vampire. Wax dhib ah uma arko.
T. Benisan 10 - 04/2022/14 saacada 10:XNUMX
Ka dib oo dhan, Gemara wuxuu ku qoran yahay farshaxanka gaabin xooggan. (Tani waa mid ka mid ah yaababka meeshaas, aniga, akhristaha yaabay).
Adduunyada-adduunyadu waxa lagu laalaabiyaa jumlad saddex eray ah, cutubku waxa uu ka koobnaan karaa boqollaal sano oo daldaloolo ah, intee ayay khusaysaa marka la barbardhigo PSD-ga Sare? Waxa ku jira hal jumlad oo gaaban oo fiiqan oo Gemara ah ayaa lagu daadin lahaa halkaas daraasiin, haddaysan ahayn boqolaal bog.
Anigu kama shakiyo farsamayaqaannada ereyada ugu dambeeya ee bogga Talmudic kuwaas oo ka dareen yar dumar kasta oo aan lahayn garsooraha ugu sarreeya.
Waana in aan xasuusannaa in wax walba ay bilowdeen waqti hore, ka dibna la'aanta hab wax loo qoro, baahida loo qabo in la koobiyo oo la ilaaliyo jiilasha.
Ma laga yaabaa inaad bixiso tusaale? Maxaa iyo sidee u gelin lahayd Sugia Danan?
Talaado Nissan 10 - 04/2022/15 saacada 39:XNUMX
Waan kugu raacsanahay, aniga iguma dhacayso inaan Gemara dib u qoro. Isbarbardhigga xukunnada casriga ah waxay khuseeyaan xukunnada casriga ah. Oo laga yaabo inay u socoto dariiqa uu wadaadku xertiisa wax u baro. Waxaan filayaa haddii uu kani yahay wadaad ay barato, inay arrintan bari doonto ardaydeeda, laakiin waxaa jiri doona tilmaam yar oo calaamad ah. Liibaan, dheh iyo wixii la mid ah. Sheekada dhimashada ee barafku ma laha wax macno ah oo dhan, kaliya masiibo ka dhici karta xitaa maanta Ukraine, waxaad leedahay hadal xiiso leh, oo ku saabsan afka. Ma waxaad soo jeedinaysaa inay jireen tilmaamo gaar ah oo aan lagu kaydin qoraalka kooban ee qoraalka dambe? Ma aqaan oo uma maleynayo inay jirto waddo lagu ogaado. Waxaa laga yaabaa in ay mudan tahay in laga doodo kuwa aqoonta u leh halkan haddii meel Shas ka mid ah ay jirto dabeecad 'dareen' ka badan oo shay ah. Tusaale ahaan, bogga maanta waxaa ku yaal odhaah la jeclaysto oo soo baxday dhawr jeer - ma waxaynu la macaamilnaa kuwa sharka leh? Kani waa hadal xaqiiqo ah oo gebi ahaanba ah, laakiin waxa uu leeyahay laxan jaahwareer la jecel yahay.
Waqtiga Tawreed iyo wakhtiga salaadda (Sarah iyo xoolaheeda)
Talaado Nissan 10 - 04/2022/16 saacada 03:XNUMX
iyada iyo Sarah - hello,
Tannaim iyo Amorayim oo lahaa halakhah - sidoo kale waxay lahaayeen halyey iyo qorayaasha salaadda. Erayadooda Halacha - hubso inaad dejiso erey-xaqiiqda dhabta ah. Iyadoo dunidooda shucuur - waxay ku muujiyeen erayadooda halyeyga iyo ducooyinka ay aasaaseen (qaar ka mid ah salaadda shakhsi ahaaneed ee quruxda badan ee sheegay in Tannaim iyo Amoraim 'Batar Tzlotya' lagu soo ururiyay Tractate Brachot, qaar badan oo iyaga ka mid ahna waxaa lagu daray 'Siddur') . Wakhtiga Tawreed si gooni ah iyo wakhtiga salaadda goonida ah.
Salaan, Hillel Feiner-Gloskinus
Oo aan la mid ahayn u janjeera culimada Tawreed maanta in ay isku daraan daraasadda iyo dareenka, taas oo laga odhan doono: 'Qofkii bara gabadhiisa Tawreed - wuxuu baraa salaadda 🙂
"Qalbigaagana ku soo noqo" - adigoo qalbigiinna gelinaya nuxurka daraasadda
Laba iyo tobnaad ee Nissan 12 - 04/2022/16 saacada 51:XNUMX
In kasta oo daraasaddu ay tahay inay noqoto 'maskaxda xukuma wadnaha'. Barashada Tawreed waxay u baahan tahay dhegeysiga Tawreed oo aan had iyo jeer ku habboonayn rabitaanka wadnaha - ka dib, caddaynta maskaxda ka dib - waa inaan wax u wareejinaa qalbiga rabitaanka inaan abuurno aqoonsi shakhsi ahaaneed oo lala yeesho kuwa bartay.
Fiiri maqaalka Rebbetzin Or Makhlouf (Ramit in Midreshet Migdal-Anaz), ee faylka "Sababtoo ah waxay yihiin xayawaan," Migdal Iz Tisha: 31, bogga 0 ka dib. Halkaa waxa ay ka soo xigatay, waxyaabo kale, xanuunka Grid Soloveitchikf, dhalinyaradii ultra-Orthodox ee ku guulaystey goobta dadaalka garaadka… waxay heleen aqoonta fikradaha iyo xukunada. Waxa uu ku raaxaystaa duruus qurux badan oo uu u dhexgalo arrin murugsan. Laakiin wadnuhu wali kama qayb qaato falkan… Halacha uma noqonayso xaqiiqo maskaxeed isaga. Aqoonta dhabta ah ee Shechinah way maqan tahay… '209 Erayada Aragtida, bogga XNUMX). Tixraac maqaalka dheer
Ha la ogaado in Tawreedku u baahan yahay firfircoonida wadnaha ka hor iyo ka dibba. Inta ka horreysa - hilowga ah in Ilaah lala xiriiriyo xikmaddiisa iyo rabitaankiisa Tawreed iyo ducada in aan xaq u yeelan doono in aan toosinno runta; Waxaa ku xiga duco ah in aan xaq u yeelan doono in aan ku dabaqno nolosha qiimaha aan ka baranay.
Laba iyo tobnaad ee Nissan 12 - 04/2022/16 saacada 56:XNUMX
Faqrada 1aad, sadarka 4aad
Aqoonsiga shakhsi ahaaneed ee bartaha…
'Seef bawdyaha dhexdooda iyo cadaab furan oo hoostiisa ah' waxay u baahan tahay go'aan ka fiirsi iyo degganaansho leh
T. Benisan 10 - 04/2022/14 saacada 57:XNUMX
In SD XNUMX ee Nissan P.B.
Garqaadaha marka uu go'aan qaadanayo waa in uu ku dhaqmaa si ka baxsan duufaanta dareenka laba geesoodka ah. Dhanba waa u hoog oo naftu haduu khaldamo oo nin naagtiisa ka tago, midna hoog iyo hoog haduu ku xidho naag loo ogolaan karo. Maahmaah xukunkeedu waa nin ku tunta dariiq cidhiidhi ah oo godka cidhifkiisa ah, in yar oo midig iyo bidix u leexdaa ay god godka ku riddo.
Garqaaduhuna waa in uu laban laabaa werwer, waayo, danayn la’aantu waxa ay u horseedaysaa xukun aan run ahayn oo aan waxba ka jirin, gar-qaade Alle ka cabsadana waa in uu daneeyaa, oo ka taxadaraa in aanu fashilmin oo uu ogolaado xaaraanta, kana taxadaro in aanu ka reebin. la ogol yahay. Welwelkiisa iyo welwelka uu ka qabo in caddaaladda la daabici doono - waa ujeeddada uu si hagar la'aan ah u raadinayo runta dhabta ah.
Laakin qiirada aadka u qallafsan ee ka hor istaagtay in uu caddeeyo xaaraanta – iyada lafteedu waxa ay u baahan tahay in caddaynta lafteedu si ka fiirsasho iyo degganaansho leh loo sameeyo, waayo caddaynta welwelka iyo miyir-beelka ka dhashay – ma ay dhaafi karin runta. Sidaa darteed, garqaaduhu waa inuu is dejiyaa inta lagu guda jiro weydiinta, oo uu u diyaargaroobo inuu tixgeliyo dhammaan xulashooyinka, xitaa kuwa ugu xanuunka badan. Haddaba, marka su'aashu timaado - garqaaduhu waa inuu dabaylaha dareenka dhinac iska dhigo oo si deggan u fekero.
Taas ninkii halligaya wuxuu la mid yahay dagaal-yahan la toogtay, oo aan degdeg uga falcelin. Waa in uu cabbaar istaagaa, oo uu gabbadaa, daawado meesha laga toogto, ka dibna uu meel fogeeyo oo uu si sax ah u toogto bartilmaameedka. Qaladka lagu dhufto cadawga ayaa halis u ah qofka wax tooganaya, maadaama uu cadawga ku gacan gelinayo meel uu magan galo.
Oo sidaas oo kale waa xaaladda samatabbixiyaha ee ku yimaada dhacdo naxdin leh, nugul badan iyo dhaawacyo badan, kaas oo ay tahay inuu si degdeg ah u akhriyo xaaladda, oo dejiyo mudnaanta. Isla markiiba ka hadal waxa isla markaaba khatarta ah, si degdeg ah uga hadal waxa degdega ah, una dhaaf heerka ugu dambeeya waxa aan degdeg ahayn. Qiimaynta xaaladda la kormeeray - waa aasaaska daawaynta habboon.
Rabitaanka xooggan ee lagu doonayo in lagu guuleysto dagaalka ama lagu badbaadiyo dhaawacyada - waa shidaalka ku dhiirigeliyay dagaalyahanka ama maamulaha inuu si tabaruc ah ugu shaqeeyo cutubka dagaalka ama ciidanka samatabbixinta, laakiin go'aanka waxa iyo sida loo sameeyo xaaladda 'cilad-darrada' - waa in la sameeyaa. oo leh xisaab iyo xukun deggan.
Dabcan waa wax aan macquul aheyn in si degan loo fekero marka aad la kulanto shil lama filaan ah, in culeyska dartiis uu qofku iloobo 'aragti' oo dhan. Si taas loo gaaro, sharci-yaqaannada halakhic, dagaalyahannada iyo shaqaalaha samatabbixinta waxay qabtaan 'koorso tababar' kaasoo ku dadaalaya inuu saadaaliyo 'Batalam' kasta oo suurtagal ah, si ay u diyaariyaan qaabab ficil oo la mid ah xaalad suurtagal ah oo la mid ah, iyo xirfad-yaqaannada kama falceliyaan xaalad kasta. Dabadeed markii 'cilad-xumadu' timaaddo - isla markaaba nidaamka ficilku wuu soo baxayaa oo waxaad u dhaqmi kartaa si habsami leh adigoon dib u xamanayn. Qorshayaasha waa la fakaray oo horay ayaa loo soo shaqeeyay.
Arrimaha Tractate Yavmot. Masiibooyinka dhulgariirrada iyo guryaha dumay, cudurrada iyo cudurrada faafa, waayitaanka dadka safarka ganacsiga iyo maraakiibta ku degtay badda, dagaallo iyo liisaska iyo shirqoollada - waxay ahaayeen gebi ahaanba xaalado suurtagal ah oo adduunka ah oo ay ku noolaayeen xikmado, gaar ahaan waagii kacdoonkii Roomaanka. , Holocaust iyo kacdoonkii Bar-Kochba.
Buug-tusaha loogu talagalay daaweynta waxtarka leh ee xaaladaha walaaca musiibada ah waa inay ahaataa mid ku habboon oo kooban, oo si cad oo kooban u koobaya dhammaan noocyada xaaladaha suurtagalka ah oo ay siiyaan nidaam daaweyn, sidaas darteed maaskarada Yavmot waxaa loo qaabeeyey hab gaaban oo qallalan, sida a Buug ku saabsan aragtida dagaalka ama gargaarka degdegga ah ayaa la diyaarin doonaa.
Mahadsanid, Hillel Feiner Gloskinus
Mishnah iyo Talmud dhexdiisa, ereyada 'telegraph' waxay ku hawlan yihiin inay hadal ahaan u gudbiyaan. Si ay u awoodaan in ay wax u xafidaan, waa in loo qaabeeyaa qaab iftiin iyo nuugis leh. Sheeko qoto dheer oo dheer ama xanaaq maskaxeed kuma faa'iideyso xifdinta. Talmud waxa loogu talagalay dersi qoto dheer, ducaduna waa daadinta nafta. 'Sub' waa inuu noqdaa mid kooban oo kooban
'Willen wuxuu magacaabay Yacquub habeenkaas' - duufaan shucuur ah oo u baahan ficil deggan
T. Benisan 10 - 04/2022/15 saacada 15:XNUMX
Oo sidaas daraaddeed Yaakov Avinu, oo ku tukanaya welwel iyo welwel, 'Fadlan i badbaadi, isla markiiba, walaalkay, isla markiiba samee ... waaba intaasoo uu yimaadaa oo uu hooyo u diyaariyaa wiilal' - wuxuu sii wadaa inuu u dhaqmo si deggan. Isla markiiba ma bilaabo inuu cararo. Laakiinse isaga iyo xeradiisiiba way seexdeen, oo bal yaa ka seexan kara xaaladdan xun?
Oo weliba Daa'uudna wuu ka cararay wiilkiisii ​​Absaaloom, markuu jabay oo u qayliyey oo u baryay inuu ka badbaadiyo kuwii badnaa oo isaga ku kacay, iyo dadkii oo dhanba, oo ka geesta ahaa kuwii faraha badnaa ee aaminka ahaa oo isaga la hadhay. Waxa uu walaaciisa oo dhan ku sheegaa salaadda, salaaddiisuna waxay siinaysaa xoog uu ugu dhaqmo xukunka dhabta ah. Wuxuu isku dayaa habka shafeecada isagoo u diraya dareenka qadiimiga ah si uu u jebiyo talada Axiitofel, oo salaadda iyo shafeecada ka dib, wuu ku kalsoon yahay, oo wuxuu awood u leeyahay in xaaladdiisa naxdinta leh ay nabad ku wada qabtaan 'Waan jiifsan doonaa oo seexan doonaa sababtoo ah waxaad tahay Rabbiga keligiis ah oo hubaal waa deggan yahay.
Welwelku wuxuu ka helaa muujinta salaadda, oo dadkuna si kalsooni leh ayaa loogu korin karaa si miyir leh.
Talaado Nissan 10 - 04/2022/16 saacada 59:XNUMX
ku raac wax kasta oo aad tiraahdo.
Iyo xitaa gudaha halakaha marar badan ayaa shucuur badan lagu kaydiyaa. Dabcan isku darka halyeyga iyo halakhah ayaa tan u ogolaanaya ilaa xad,
Sida, tusaale ahaan (nolosheeda) mid qalbiga taabanaysa, dhadhankayga: ( Waxaan la yaabanahay haddii uu jiro garsoore maxkamadda sare ka tirsan oo isu oggolaaday inuu wax badan daadiyo)
Talaado Nissan 10 - 04/2022/17 saacada 14:XNUMX
hubaal. Waxay soo xiganayaan.
Talaado Nissan 10 - 04/2022/17 saacada 45:XNUMX
Xigasho haa, laakiin ma hubo inay bilaabi lahaayeen sheegashadan.
Sidaa darteed, waxaad arki kartaa inta xukunku sii dheeraado oo uu daaliyo, sannado badan, marka gacantu ay noqoto mid fudud oo ku taal keyboard-ka, oo dhammaan ilaha la heli karo, oo aan hadda loo baahnayn in lagu tilmaamo weriyaha.
'Waxa uu bartaa in aanu seexan' - in kasta oo xamaasaddu jirto
Laba iyo tobnaad ee Nissan 13 - 04/2022/00 saacada 04:XNUMX
BSD XNUMX ee Nissan PB
Isagoo ka hadlaya muhimadda ay leedahay xasilloonida ilaalinta marka la samaynayo, Hasidim wuxuu caddeeyey maqaalkii murtida ahaa ee 'Haa, Haaruun wuu yeelay - wuxuu baraa inuusan seexan', inaan la fahmin waxa ay tahay 'Salka Da'ata' ee uu Haaruun Ilaahay ka seexdo. amarada? Waxayna xertiisii ​​sharaxeen in kastoo Haaruun uu xamaasad ka buuxsamay markuu laambadda shiday oo ay bannaanayd in la dareemo in xamaasad darteed uu khalad ku noqon doono tafaasiisha. KML kaas oo, in kasta oo la deldelay, Haaruun ayaa ka taxaddaray inuu si sax ah u guto waajibaadkiisa.
Talaado Nissan 10 - 04/2022/17 saacada 22:XNUMX
Dhanka sheegashada qalabka (oo aan aniguba aqbalin), dunta aad ku furtay IDF, laga yaabee in dadka Suuratu ay tusaale xad dhaaf ah u yihiin sheegashadan xaalad aan mala awaal ahayn. https://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=24&topic_id=2827720&forum_id=1364
Talaado Nissan 10 - 04/2022/19 saacada 06:XNUMX
Runtii, halkaas Rami Bar akhrinta waxyaabaha waa masiibo iyo majaajillo hal meel ah. Laakiin meeshaas waxaa laga odhan karaa, Maaddaama wax hore loo sameeyey, waxay weyddiisteen camalkiisa. Oo sida muuqata ma uusan dooneynin inuu ku tiirsanaado miiska dadka kale
Talaado Nissan 10 - 04/2022/22 saacada 20:XNUMX
Waxaa jira meel loogu talagalay "dareen xukun" sida Gemaradu sheegayso marka laba qolo ay u yimaadaan inay ku doodaan Dayanim hortiisa oo go'aan cad uusan jirin, waxa loo yaqaan "Shuda Dadayin".
Talaado Nissan 11 - 04/2022/00 saacada 07:XNUMX
Shuda Dadaini waa xukun kiisas gaar ah oo aan ahayn xaalad kasta oo aan go'aan laga gaarin. Tan waxaa jira sharciyo ku filan. Laakiin xitaa Shuda ma aha dareen ee waa dareen. Ha is dagaalamin.
Talaado Nissan 10 - 04/2022/23 saacada 16:XNUMX
Fikradayda waa xaqiiqo jirta: Qof ayaa bilaabay dood online ah oo ku saabsan su'aasha "Haddii aad berrito ogaan lahayd in Masiixiyaddu run tahay - ma u beddeli lahayd qaab nololeedkaaga si habboon". Qaar ka mid ah jawaabaha doqonimada ah waxay ahaayeen "ma dhacayso sidaas darteed wax la waydiiyo ma jirto". Dadku runtii wakhti adag ayay ku adag tahay inay fahmaan qaybta su'aasha mala awaalka ah. Waxaan isku dayay inaan u sharaxo inay sidoo kale u badan tahay inay waligood ku qasbanaan doonaan inay qof aad u buuran ku tuuraan wadooyinka tareenka si ay uga hortagaan in tareenka uu dhaafo shan qof oo lagu qasbay, haddana tani waa su'aal aasaasi ah oo ku saabsan koorsooyinka falsafada anshaxa; Laakin ma aysan shaqayn...
Dabadeed qof baa igu dooday in mabda’ ahaan su’aalaha mala awaalka ahi ay fiican yihiin, balse ay jiraan waxyaabo dareen ahaan aad looga naxo, sidaa awgeed ay khalad tahay in si mala-awaal ah looga hadlo (oo ka soo horjeedda, in qof buuran uu tareen ku tunto, taas oo ah mid aad u xun oo la yaab leh). malaha haba yaraatee wax laga naxo). Qoraagu waxa uu ahaa RM dugsiga sare yeshiva, run ahaantiina iima cadda waxa uu ka qabanayo arrimahan aad halkan ku sheegtay... Si kastaba ha ahaatee, dood gaaban ka dib waxa uu i waydiiyay bal in ay sharci tahay in uu i waydiiyo " maxaad samayn lahayd haddii aad ogaato berri hooyadaa ay dilayso" . Dabcan maan fahmin waxa dhibku ka jiro taas, xitaa waxaan u tagay inaan hooyaday u sheego, oo iyaduna aan fahmin waxa dhibku yahay su'aashan… waxa kale oo inta uu muranku ka taagan yahay su'aasha, sidaas darteed ma aanan fahmin. si fiican u fahan qodobka uu isku dayayay inuu caddeeyo.
Gunta hoose - marka ay ku adag tahay dadka in ay la tacaalaan waxa ku jira (caqli ahaan!) Waxay u ordaan cirifka waxayna isku dayaan inay tilmaamaan 'dhibaatooyinka' qurxinta ee marmarsiiyo sababta marka ugu horeysa aysan ku habboonayn 'in la galo nuxurka (ka dibna) waa loo daayay in la barto oo kaliya sheeko qurux badan).
Talaado Nissan 11 - 04/2022/00 saacada 11:XNUMX
dhab ahaantii. Kaliya waxaan xusayaa in ay jirto boos uu ku sheegan karo diinta kiristaanka habkan soo socda: laga yaabee in ra'yigiisa haddii Masiixiyaddu macno samaynayso markaa may ahayn Masiixiyadda waan ognahay. Markaa ma bannaana su'aasha ah waxa aan samayn lahaa haddii aan ogaan lahaa in Masiixiyaddu ay sax tahay. Sidoo kale, ma jirto meel su'aasha ah waxa Maimonides ka sheegi lahaa xaalad kasta oo maalinteena ah. Haddii uu maanta noolaan lahaa ma uu ahaan lahayn Maimonides.
Talaado Nissan 10 - 04/2022/23 saacada 29:XNUMX
Hello Rabbii Michi.
Way adag tahay in lagu doodo sheegashadaada, runtii "macnaha guud" way caddahay in tan ugu nadiifsan oo sax ah ay tahay in lagu shaqeeyo falanqaynta macquulka ah ee xalaqada. Laakin waxaan la iska indha tiri karin in marar badan arimaha Shas ee aqoonyahanka ah lagu soo duuduubo sheekoyin siinaya in ay akhriyaan jihada shucuureed ee bini aadamka ama akhlaaqda.
Waxaan ku siin doonaa 2 tusaale (ka hore waa xoogaa daciif ah): Ka dib markii Tractate Gittin ay ka hadasho faahfaahinta dhibaatooyinka kala duwan ee mala-awaalka ah iyo kuwa dhabta ah, waxay ku dhibaysaa inay soo afjarto khudbad ku saabsan nacaybka iyo furiinka. Iyo sida ay u dhibayso Ilaah furriinka laftiisa. Maxay muhiim ugu tahay Gemaradu inuu sidan ku joojiyo Tractate-ka? Halkan miyaanay ahayn akhriska jihada?
Gemara ee Kiddushin waxaa jira halyey qurux badan oo ku saabsan Rabbi Asi iyo hooyadiis. Aad bay muhiim u tahay in ay wada gasho sharciyada Maryan, cutubka XNUMX, iyo Maimonides. Dhammaadkii arrinta waxaa lagu qoray in Rabbi Casii uu yiri "ma aqaano Nafaki" Inta badan tafsiirayaasha ayaa jumladan ku macneeyay muraayado xalaal ah. Rabbi Asi waxa uu sheegay in aanu uga tagin dhulka Israa’iil sababo kala duwan oo xalaal ah ( wasakhda quruumaha sababtoo ah waa wadaad iyo sababo kale). Maimonides wuxuu ku qoray Halacha in runtii haddii waalidkii la khiyaaneeyo uu u raaxayn karo oo uu ku amri karo qof kale inuu daryeelo iyaga. Lacagta Mishnah waxay xoojisaa Maimonides oo ay sheegtay in inkasta oo aan si cad loogu qorin arrinta ay u badan tahay in Rabbi Asi uu isticmaali jiray. Rabbi wuxuu ka cadhooday Maimonides oo ku andacoonaya in aanay sidan ahayn iyo sida qofku waalidkii uga tagi karo qof kale si uu u daryeelo. (Waxaa lagu doodi karaa in tani ay tahay tixgalin halaqic ah laakiin waxay si fudud u muujineysaa inuusan u dulqaadan karin fikradda akhlaaqda) Ma jiraan arrimo = kama tagi doono Baabuloon. Waxayna tilmaamaysaa weerarkii Rabcad ee Maimonides.
Xaqiiqdu waxay tahay in ay soo baxday in xaqiiqda dhabta ah ee caddaaladda ah ee Maimonides iyo arrimaha lacagta, laakiin indhaheenu waxay arkayaan in aqoonyahan iyo garsooruhu ay akhriyeen halyeygan dhab ahaantii akhrin jacayl ah.
Waxaan qiyaasayaa in haddii aan haysto buugga Molly ee aqoonyahan, Rabbi Yehuda Brandes, "A Legend in Really," waxaan ku siin lahaa dhowr tusaale oo dheeraad ah iyo malaha kuwa aad u guulaystay.
PS: Sugitaanka iyo sugitaanka tiir ku saabsan muranka beddelka (intee in le'eg ayaad iska caabin kartaa?)
Talaado Nissan 11 - 04/2022/00 saacada 13:XNUMX
Runtii waxaa jira dhawr tusaale. Tusaale ahaan tiirka 214 ka eeg dambaskiisa fallaadhihiisa darteed. Laakiin taasi maaha waxa aan halkan kaga hadlayo. Waxay rabeen inay i barayaan in furriinka uu yahay shay xun. Maxay tani ka qabtaa in lagu xukumo xalaqada arrimahan? Waxay la xiriirtaa hoggaanka guud ee ka dhiidhiyay halakadda in lagu dadaalo sidii looga baaqsan lahaa furriinka.
Talaado Nissan 11 - 04/2022/09 saacada 36:XNUMX
- Garqaaduhu waa inuu si qabow uga fikiraa dacwadda isaga hor imanaysa. Xalaqadu waxa ay tiraahdo shaqo kuma lahan waxa ay shucuurtu leedahay (oo sida ay aniga ila tahay xitaa waxa akhlaaqda ay leedahay ma jiro), waana wanaagsan tahay in la sameeyo. Garqaaduhu waa inuu sharciga ku gooyaa degenaansho, sidaas darteedna uu xaq u leeyahay inuu toosiyo runta Tawreed. "Ilaa hadda hadalkaaga.
Waxaan tusaale u soo qaatay sheekadii Rabbi asi iyo hooyadii lagu xukumay Halacha. Waxaan ku soo gaba gabeeyay in Rabi iyo Rashash aanay ku heshiin si xalaal ah, xagga dadnimo iyo akhlaaq ahaanba.
Talaado Nissan 11 - 04/2022/10 saacada 03:XNUMX
Xigasho qayb ka sii daran ayaa buuxda in la soo xigto. Ka dib oo dhan, waxaan qoray in ay jirto meel lagu soo bandhigo tixgalinta nooca B ee marxaladda B, ka dib markaan dhammeyno ka doodista fursadaha aasaasiga ah ee halaktik. Haddii sharciga aan la gooyn, laakiin dhowr doorasho ayaa hadhsan, habka lagu go'aamiyo dhexdooda waxay sidoo kale ka koobnaan kartaa akhlaaqda (iyo laga yaabee dareenka sida tilmaan).
11 ee Nissan 04 - 2022/19/59 saacada XNUMX:XNUMX
1. Ma laga yaabaa in tani ay tahay mid ka mid ah sababaha Gemaradu aysan u ahayn haweenka oo ay u diidaan inay ka hadlaan? (Weydiin ma go'aamiyo)
2. Runtu waxa ay tahay in sanado aan akhriyo "Laba Baybal iyo Hal Tarjumo" waxa aan la kulmaa qisooyin Tawreed ka yimid oo aniga iyo danta jiilkeena dheddigga ah ay ka maqan tahay dareen Ma hayo ereyo aan ku gudbiyo dareenkayga gaar ahaan waxaan ku mashquulsan nahay shucuur, anigu hadda ma xasuusto tusaalayaal badan marka laga reebo mid markii Eliezer u yimid wada xaajood uu ku qaadanayo Rebecca (waqtigaas dunidu weli ma noqon hal qoys, waa waxaa laga yaabaa inay tahay kala goyn caalami ah oo qoyskeeda ah oo ay halkan ku soo kordhinayso dareenka) iyo aabaheed Betuel iyo walaalkeed Ben waxay isku dayeen inay dib u dhigaan ka dibna gabadhu (inay iloobin in ay ahayd saddex sano jir waa qodob kale oo ka qaybqaata dareenka ciyaarta oo dhan) xikmado ayaa waydiinaya oo aabbeheed macbudka ku jira? xikmado ayaa ku jawaabay in uu dhintay (waxa uu cunay saxanki sumaysan ee uu Eliiceser u diyaariyay malaa’igtii ku beddeshay saxanadii sidii aniga oo xasuusin u ahaa hyderka) isla markiiba waxa la sheegay in ay waydiiyeen oo ay u soo direen Rebecca in ay soo socoto, halkanna wiilkii. waxay waydiinaysaa xaalada maanta masiibada noocan oo kale ah Dom Eliezer ayaa ugu yaraan wakhtiga shinni qorshayaashiisa dareemi lahaa oo uu dareemi lahaa wax yar oo ka xishooda fasalkiisa oo dhan iyo joogitaanka guriga hadda oo ay wajahayaan masiibada qoyska ka tag aagga sidii uu ku yimid waqti adag ama beddelaad dhib la'aan Ujeeddada imaatinka iyo kaalmaynta jidhkiisa iyo naftiisa oo dhan si uu u abaabulo aaska iyo dhismaha teendhada iyo keenista kuraas loogu talagalay tacsida iwm) laakiin ficil ahaan Dunida Tawreed sida caadiga ah way sii socotaa marka laga reebo in qorshuhu u sii socdo sidii loo qorsheeyay Autism, rabbi halkan wuxuu leeyahay daawo ka timid "Dauriyta" si uu u noqdo shirkad wanaagsan.Arrinka Yoseef iyo walaalkii, haa, nimanyahow, xaalku waa sidaas ( naxdintan Ceesaw ma soo marin sida ay xikmaduhu sheegeen. Waxaa bixiyey Mordekay Yuhuudi kumannaan sano ka dib, sida la wada ogsoon yahay). Marka laga soo tago badhanka shaadhka, mar ay garsoorayaashu isku dayeen inay mid ka mid ah ku dhiirigaliyaan inuu furo xaaskiisa iyagoo u sheegay in ay qoran tahay in meesha allabariga ay ilmada ka soo daadiso wuxuu ugu jawaabay ma xuma ilaa maanta waxaan ilmada ka qubtay dhib ma yeelanayso inaan ilmo yar ka daadiyo. Haddaba sidoo kale, Aabbe macbudka dhexdiisa ku arkay isagoo wiilkiisii ​​mindi ku weeraraya, halkaasna aabbuhu muuqaladii naxwaha galay oo uu amray in uu wiilkiisa dibadda u soo kaxeeyo, isaga oo u lulanaya caawinta isaga oo ka baqaya wasakhnimo (halkii uu garaaci lahaa) iyo Gemaradii. wuxuu halkaas kaga hadlayaa aabbahan, haddii uu leeyahay ixtiraam dheeraad ah ama "autism" ee la xidhiidha dilka
3. Marka la eego hadalkii raabi ee ahaa “Waxay la mid tahay in la waydiiyo R. Chaim waa maxay digsi” tusaale ahaan rabbaanku kuma guulaysan oo waxaan ku tusayaa sheeko. ? R. Avraham wuu qiirooday oo wuxuu ku yidhi ma fahantay macnaheeda? In dhammaan Baabuloon iyo reer Yeruusaalem iyo Midrashim iyo Tosefot iyo Zohar, iwm, ereyga avokado uusan ka jirin.
Masach Pan waxaa horey loogu sheegay Tawreed dhowr jeer halkan si loogu mahadceliyo rabbaaniga "maqaalka uusan rabbi qorin" ka dib dhimashadii rabigeena ee ilaalinta xukunka si la mid ah isaga oo la amray inuu sheego wax la maqlo wuxuu ahaa mid muhiim ah) iyo balli uu jecelyahay in uu ku qalo lo'da barakeysan meel kasta hadda lagu jiro sodonmeeyada marka uu kululaado waxaa aad uga nugul qaraxa Buurta Macbadka in lagu gowraco sac xurmo leh, mar aan waydiiyay raahibkeena oo ku sugan xaafad aad u yaqaana aflagaado in la ii oggolaaday in aan runta sheego (waxa aan ku darayaa in ay ii tahay ammaan aad u weyn) laakiin qofka maqlaya jilif waxa uu u malaynayaa in sheekadani tahay mid liidata oo aan tusaale ahaan u soo qaatay sheekooyinkii ku saabsanaa R. Chaim (by the way R. Chaim would). ku tukada saddex jeer maalintii in aan waxba la xasuusan marka laga reebo Tawreed daliil kale oo ka dhan ah Raabi Shefiloot Kaaliyayaasha) waxayna ila tahay in uu Raahib iigu jawaabay malaha waa xaaraan, waxaana halkaas igu yidhi aniga oo arday Yeshiva ah oo Ameerika jooga. waxay ahaayeen doorashooyin madaxtinimo waxaan u malaynayaa madaxweyne Johnson la odhan jiray oo waxay lahaayeen wasiir yeshiva magacaas iyo madaxooda yeshiva oo aad ugu milmay barashada markay u sheegeen Rosh Yeshiva wuxuu la yaabay sida wasiir yeshiva uu ku noqday madaxweynaha Maraykanka hal habeen.
11 ee Nissan 04 - 2022/20/15 saacada XNUMX:XNUMX
R. Chaim ee digsiga waa R. Chaim of Brisk
12 ee Nissan 04 - 2022/01/06 saacada XNUMX:XNUMX
Xaggee taasi ka timaadaa? Si kastaba ha ahaatee, waxa ugu weyn ayaa ah in aan labadeenuba qiranno in aysan ahayn R. Chaim Welder
12 ee Nissan 04 - 2022/02/15 saacada XNUMX:XNUMX
Waxaa la sheegay in Rabbi Chaim of Brisk uu ka soo saaray digsiyada iyo dheriyada ra'yi ururin, taas oo macnaheedu yahay in aan loo baahnayn in la ogaado sida saxda ah ee digsiga loo dhisay iyo waxa saamiga u dhexeeya dhererka gacanta iyo dhexroorka dusha sare. . Sidaa darteed waxaa dhacday in sida caadiga ah aan loo baahnayn in ilmuhu fahmo waxa dhabta ah ee kaliya in ay sameeyaan wax aan ahayn sida uu sameeyo oo ay jiraan dhammaan noocyada sharciyada, iyo fahamkiisa xalaasha ah ee aan waxyeello u geysan wax.
Guud ahaan, kaliya R. Chaim waa R. Chaim of Brisk (ugu yaraan meelaha lagala macaamilo Gemara halkii Halacha), sida Rashba kaliya waa R. Shlomo ben Aderet oo aan ahayn Rash Mashantz, inkastoo sharafta labaduba aad bay u weyn yihiin.
Laba iyo tobnaad ee Nissan 12 - 04/2022/17 saacada 50:XNUMX
Raabbiyow ma ii samaysay sheeko aan si sax ah u maqlay iyadoo xaaladdan jirta:
Waxaan xasuustaa in casharkii aan ka qayb galay, uu wadaadkii casharka inoogu sheegay (dhammaan ka qaybgalayaashu waxay ahaayeen rag) inuu dhigay cashar Gemara si loo dhiso siminaar, wuxuuna ku yaallay Tractate Yavmot.
Wuxuu noo sheegay in uu sabuuraddii ku sawiray dhammaan "qoyska" arrintu ka taagan tahay oo uu "Xs" saaray dhammaan "dhintay" ka dibna uu dib u eegay oo uu arkay in wejiyada habluhu ay argagaxsan yihiin.
Waxay u naxariisteen "mid dhintay" oo ku sawiran looxa.
Baahnayn in la sheego, dhammaan waan ku qoslay oo ku dhoola cadeynay sheekada.
Ku biir 3,094 macaamiil dheeraad ah
Xagga tiirka 36
Samaynta aaminsanaanta caqli-galnimada dadka aan caqli-gal ahayn
Cillaynta Ilaahay adoo ka gudbaya casaan
Adeer Daaran Kacitaanka iyo dhicitaanka Bennett iyo macnahooda (Column 486)
Ori Daaran Kacitaanka iyo dhicitaanka Bennett iyo macnahooda (Column 486)
Haim Daaran Kacitaanka iyo dhicitaanka Bennett iyo macnahooda (Column 486)